पत्रकार महासंघ चुनाव : कहाँ कसले जित्यो ? देशभर प्रेश यूनियनको पक्षमा परिणाम – khabarmala.com
पत्रकार महासंघ चुनाव : कहाँ कसले जित्यो ? देशभर प्रेश यूनियनको पक्षमा परिणाम
Newportalmala २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७	No Comments
काठमाडौँ : नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार भएको चुनावको मतपरिणाम आउन थालेको छ । बिहीबार बिहानसम्म प्रदेश एसोसिएटबाट विकास कार्की र कृति भट्टराई केन्द्रीय कार्यसमितिमा विजयी भएका छन् । अध्यक्षमा बैकुण्ठ पराजुली बुधबार नै विजयी भएका थिए ।
यस्तै झापामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रेस युनियन एकराज गिरी नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको छ । दार्चुलामा भने कृष्ण धामी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै ललितपुर अध्यक्षका प्रेस संगठनका सागर न्यौपानेको लोकतान्त्रिक प्यानल विजयी भएका छन् । बझाङको अध्यक्षमा शैलेन्द्र रोकायाको प्यानल विजयी भएको छ ।
पत्रकार महासंघ काभ्रेको अध्यक्षमा प्रेस युनियनका बद्रीप्रसाद तिमल्सिना विजयी भएका छन् । दोलखामा नेपाल प्रेस युनियनका दीपशंकर चौलागाँई अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
नयाँ पत्रिका प्रतिष्ठान शाखामा भवानीश्वर गौतम नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा नवराज दाहाल, उपाध्यक्ष (महिला) मञ्जु टेलर, सचिव शंकर लामिछाने, सहसचिव (खुला) तीर्थ अधिकारी, सहसचिव (समावेशी) नवीनकाजी राई, कोषाध्यक्ष अर्जुन अधिकारी चयन भएका छन् ।
यसैगरी, सदस्यमा नवराज शर्मा, नारायणप्रसाद ओली, भोजराज भण्डारी र सन्तोषकुमार राई, संघीय परिषद् सदस्यहरूमा नवराज मैनाली र भरतराज पोखरेल तथा प्रदेश परिषद् सदस्यहरूमा सुदीपकुमार ढुंगाना, नुनुता राई र विनोद पाण्डे चयन भएका छन् ।
डोटीमा नेपाल प्रेस युनियनका मोहन शाहीको प्यानल नै विजयी भएको छ । यस्तै बर्दियामा यादव आचार्यको लोकतान्त्रिक प्यानल नै विजयी भएको छ । बुधबार राती मतगणना भएका धेरै ठाउँको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।
अहिलेसम्मको मतपरिणाम हेर्दा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानलले धेरै ठाउँमा जित हात पारेको छ । महासंघको अध्यक्षमा पोखरेल र निर्मला शर्माको प्यानल प्रतिष्पर्धामा थियो । यस्तै अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गजेन्द्र बुढाथोकीलाई पनि केहीले भोट हालेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको मतदान सकिएको छ । बुधबार देशभर भएको मतदानमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक कपिल काफ्लेले जानकारी दिए ।
केही स्थानको मतगणना सुरु भएको काफ्लेको भनाइ छ । ‘आज २५ गते चैत्रमा पत्रकार महासंघका तीनै तहको निर्वाचन उत्साहजनक तरिकाले सम्पन्न भयो । देशभर ९७ केन्द्रमा चलेको निर्वाचनमा अधिकांश निर्वाचन समितिले निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ भने केहीले मतगणना पनि सुरु गरेको बताउनुभएको छ’, काफ्लेले भने, ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।’
Previous Previous post: New visa rule for foreigners in South Korea
Next Next post: धनाढ्यको सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान खस्कियो,विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस
एनआरएन अमेरिका विघठनको संघारमा, आईसिसिको निर्णय लत्याए खारेज हुने २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७
कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि परिवर्तन हुने २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७
पत्रकार महासंघ अध्यक्षमा पोखरेल प्यानल विजयी : कसको मत कति ? २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर: नयाँ कोरोना २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७
चारमन्त्रिको सांसद र मन्त्रिपद खुस्कियो २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७
धनाढ्यको सूचीमा विनोद चौधरीकाे स्थान खस्कियो,विश्वकै अर्बपतिमा अमेजन मालिक जेफ बेजोस २६ चैत्र २०७७, बिहीबार ०२:५७